Ahoana ny fanesorana virosy amin'ny Mac anao | Vaovao Gadget
Ahoana ny fanesorana viriosy amin'ny Mac anao
Vaovao momba ny gadget | 24/03/2022 12:40 | Apple
Toy ny rafitra informatika rehetra, ny Manana ny fahalemeny ny rafitra fiasan'ny Apple. Ireo dia ampiasain'ny viriosy mba hidirana amin'ny solosaina ary manana fampahalalana tsiambaratelo, toy ny carte de crédit na antsipirian'ny banky. Matetika, ny mpampiasa dia tsy mahalala akory ny fisian'ny virus, satria mangina sy parasitika ny fomba fihetsiny.
Raha izany no zava-misy aminao dia manana vaovao tsara ho anao izahay: misy fomba maro hiarovana ny Mac-nao.Ny fomba malaza indrindra dia ny fametrahana antivirus manokana, na dia misy aza fomba bebe kokoa hanesorana otrikaretina amin'ny Mac tsy mila mahafantatra lalina ny fomba fiasan'ny kaody anatiny.
1 Inona no atao hoe virus ary nahoana izy io no zava-dehibe?
2 Ahoana ny fanesorana virosy amin'ny Mac?
2.1 fifantohana amin'ny soritr'aretina
2.2 Esory ny rindrambaiko napetraka
2.3 Fametrahana rindrambaiko fiarovana
Inona no atao hoe virus ary nahoana izy io no zava-dehibe?
Izy ireo dia fantatra amin'ny hoe virosy solosaina amin'ny programa manarona asa hosoka, toy ny fangalarana ny maha-izy azy na ny famindrana banky. Noho izany, ny viriosy dia rindrambaiko izay heverin'ny fametrahana, raha tsy fantatry ny mpampiasa izany, ny fidiran'ny olona tsy nahazoana alalana amin'ny fampahalalana voarakitra ao amin'ny PC.
Na dia matetika isika no miresaka momba azy ireo, dia misy viriosy maro izay tsy mitovy amin'ny azy modus operandi. Amin'ny rehetra, ny malware izy ireo no tena ampiasain'ny mpijirika na mpanao heloka bevava an-tserasera. Ny sasany amin'ireo malware be mpampiasa indrindra hanafika ny Mac dia ny Trojans, ransomware, phishing na adware. Ny tsirairay amin'izy ireo dia miasa amin'ny fomba hafa ary miditra amin'ny angona amin'ny lalana samihafa.
Ahoana ny fanesorana virosy amin'ny Mac?
Ny ankamaroan'ny viriosy dia mahazo miditra amin'ny rafitra amin'ny fametrahana rindrambaiko sasany. Na izany aza, misy fomba hafa ampiasain'ny mpanao heloka bevava amin'ny Internet mba hidirana ao anaty rafitra; hafatra, mailaka, malvertising... Na ahoana na ahoana, ny fidirana amin'ny malware dia azo esorina raha manana fitaovana ilaina isika.
Attention to ny soritr'aretina
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia mijanona ho tsy hita maso ny viriosy ary toa tsy mihetsika mandritra ny fotoana fohy. Amin'ity dingana ity, cybercriminals manangona vaovao tsiambaratelo ary manandrana miditra amin'ny fitaovana hafa hanohizana ny asa hosoka. Noho izany antony izany, maro ny olona tsy mahafantatra fa voan'ny aretina ny Mac raha tsy efa tara loatra.
Ny sasany amin'ireo soritr'aretina izay azon'ny Mac voan'ny otrikaretina dia: fahaverezan'ny fampandehanana, fametrahana ny rindranasa vaovao amin'ny fomba mandeha ho azy, miadana, olana fitahirizana, fandefasana mailaka sy hafatra faobe amin'ny olom-pantatra... Amin'ny ankapobeny, izay fihetsika tsy mahazatra tokony hampiahiahy antsika ny fisian'ny singa vahiny.
Fafao el rindrambaiko napetraka
Raha toa ka napetraka ny rindrambaiko maloto ary hita ao amin'ny rafitra, dia manoro hevitra i Apple fanesorana programa ary alefa any amin'ny fako. Ity dingana ity dia azo tanterahina amin'ny Torolàlana Apple.
fametrahana de rindrambaiko fiarovana
Noho ny fisehon'ny fandrahonana amin'ny Mac dia misy orinasa maro manokan-tena amin'ny asany Fanatsarana sy fiarovana ny rafitra Mac. Ireo lozisialy ireo dia miaro ny Mac ary manadio sy manala programa izay heveriny fa mampiahiahy. Toy izany koa, mampitandrina momba ny fidirana amin'ny pejin-tranonkala izay tsy fantatr'izy ireo ho azo itokisana ny fiaviany, ary koa ireo rindranasa tsy manana fiarovana ilaina amin'ny Mac.
Na eo aza izany, ny malware sasany dia maka ny endriky ny rindrambaiko fiarovana. Noho izany dia tsara ny mandeha any amin'ny programa fantatra izay manana rakitsoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Apple » Ahoana ny fanesorana viriosy amin'ny Mac anao
ILIFE A11, safidy misy endri-javatra maro sy vidiny tsara [Famerenana]